Ntụziaka Maka Ọmụmụ Ihe Etiti Izu
GỤỌ NKE Abkhaz Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Ewe Fante Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Serbia) Ronga Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Isiokwu Ndị Dị N’akwụkwọ A
Izu Onye Nlekọta Sekit Ga-eleta Ọgbakọ
Izu Ọgbakọ Ga-aga Mgbakọ Sekit ma ọ bụ Mgbakọ Ukwu
Izu A Ga-echeta Ọnwụ Jizọs
Onye Nlekọta Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ
Onyeisi Oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ
Onye Na-ahaziri Ndị Okenye Ọrụ
Klas Ndị Ọzọ
1. Otú a ga-esi na-eduzi ọmụmụ ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ bụ otú ahụ ọ dị n’Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ nakwa otú e kwuru n’akwụkwọ a. E kwesịrị ịgba ndị nkwusa niile ume ka ha soro na-eme ihe omume Ozi Ụlọ n’Ụlọ, Nletaghachi, Ọmụmụ Baịbụl nakwa Ọgụgụ Baịbụl. Ndị na-abụghị ndị nkwusa, ma ha na-abịachi ọmụmụ ihe anya nwekwara ike iso na-eme ihe omume ma ọ bụrụ na ha kwetara ihe Baịbụl na-akụzi, na-akpakwa àgwà otú Baịbụl kwuru Onye Kraịst kwesịrị isi na-akpa àgwà.​—be p. 282.
2. Okwu Mmeghe: Nkeji 3 ma ọ bụ ihe na-erughị ya. N’izu ọ bụla, a bụchaa abụ ma kpee ekpere mmeghe, onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ga-ekwu okwu mmeghe ga-eme ka ụmụnna tụsiwe anya ike maka ihe ndị a ga-amụ n’ụbọchị ahụ. Ọ ga-ajụkwa otu ajụjụ si n’akwụkwọ bụ́ Azịza Ajụjụ Ndị A Ga-ajụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ.
3. Akụ̀ Ndị Si n’Okwu Chineke:
Okwu: Nkeji 10. A ga na-ede isiokwu ya n’akwụkwọ Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ, deekwa ihe abụọ ma ọ bụ atọ gbara ọkpụrụkpụ a ga-ekwu n’okwu ahụ. Ọ bụ okenye ma ọ bụ ohu na-eje ozi ruru eru ka a ga-ekenye ya. N’izu ọ bụla a ga-ebido ịgụ akwụkwọ Baịbụl ọhụrụ, a ga-ebu ụzọ gosi obere vidio ga-akọwa akwụkwọ Baịbụl ahụ. Onye ga-eme ihe omume a nwere ike ikwu otú vidio ahụ si gbasa isiokwu ọ na-ekwu okwu na ya. Ma, ọ ga-ahụkwa na o kwuru okwu n’ihe niile dị n’akwụkwọ usoro ihe omume. Ọ bụrụ na oge dị, o kwesịrị ịkọwa ihe osise na amaokwu Baịbụl ndị dị n’Usoro Ihe Omume Ozi Anyị, bụ́ ndị gbasara isiokwu ọ na-ekwu okwu na ya, n’ihi na ha dị ebe ahụ ka e jiri ha ghọta ihe a na-ekwu n’isiokwu ahụ.
Ihe Anyị Mụtara n’Okwu Chineke: Nkeji 8. Ọ ga-abụ ajụjụ na azịza, ọ gaghị enwe okwu mmeghe ma ọ bụ okwu mmechi. Ọ bụ okenye ma ọ bụ ohu na-eje ozi ruru eru ka a ga-ekenye ya. Onye ahụ nwere ike ịhazi nkeji ole ọ ga-eji kwuo okwu n’ajụjụ nke ọ bụla, dabere n’otú o si gbasa ọgbakọ na ihe ọ chọrọ ka ha mụta na ya. Ma, o kwesịrị ịjụ ha ajụjụ ndị ahụ niile. Ọ ga-ekpebikwa ma à ga-agụcha amaokwu Baịbụl niile dị n’ajụjụ abụọ mbụ dị n’ihe omume a. Onye ọ bụla ga-aza ajụjụ kwesịrị iji tịnkọm tịnkọm 30 ma ọ bụ ihe na-erughị ya zaa ya.
Ọgụgụ Baịbụl: Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya. Ọ bụ nwanna nwoke ga-eme ihe omume a. Ọ ga-agụ ebe e kenyere ya n’ekwughị okwu mmeghe ma ọ bụ okwu mmechi. Onyeisi oche ọmụmụ ihe a ga-agbasi mbọ ike na-enyere ndị na-eme ihe omume a aka ka ha na-agụzi ihe agụzi, na-agụ ya otú ndị ọzọ ga-aghọta ya, na-agụ ihe were were, na-agụ ya ka o doo anya, na-agbanwe olu ha otú kwesịrị ekwesị, na-akwụsịtụ ebe ha kwesịrị ịkwụsịtụ, na-agụkwa ya otú ha si ekwu okwu.
4. Mụtakwuo Izi Ozi Ọma nke Ọma: Nkeji 15 ma ọ bụ ihe na-erughị ya. A haziri agba a ka o nyere anyị aka ịkwadebe ozi ọma ma mụtakwuo otú anyị ga-esi na-ezi ozi ọma nke ọma ma na-ezi ihe nke ọma. Onye ga-eme ihe omume mkparịta ụka nke mbụ na nletaghachi kwesịrị iji ihe e dere n’Ihe Gị na Mmadụ Nwere Ike Ikwurịta nke dị na peeji nke mbụ n’akwụkwọ Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ mee ya. Ndị nkwusa nwere ike ikpebi ma hà ga-esi n’Ihe Ndị Anyị Ji Akụziri Ndị Mmadụ Ihe nye mmadụ akwụkwọ ma ọ bụ gosi ya vidio. Akwụkwọ Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ga-ekwu oge ihe omume nwa akwụkwọ nke ọ bụla ga-ewe, mgbe ụfọdụ, o nwekwara ike ikwu ihe ndị ọzọ gbasara ihe omume ahụ. Ndị e kenyere ihe omume n’agba a ekwesịghị ikwu ihe ndị na-adịghị n’ebe ihe omume ha si naanị n’ihi na ha chọrọ ikwuzu oge e kenyere ha. Ọ bụrụ na mmadụ akwadebe ihe omume ya nke ọma, o nwere ike imecha ya otu nkeji ma ọ bụ abụọ tupu oge e kenyere ya agwụ. E nwekwara ike ikenye okenye ihe omume ndị a ma ọ dị mkpa.
Vidio Maka Ihe Gị na Mmadụ Nwere Ike Ikwurịta: A ga-ele vidio ga-egosi otu e nwere ike isi zie ozi ọma n’izu nke ọ bụla n’ọnwa, ma kwurịta ihe ndị e nwere ike ịmụta na ha. Vidio ndị ahụ ga-egosi anyị otú anyị ga-esi na-enwe mkparịta ụka nke mbụ, nletaghachi nke mbụ nakwa nletaghachi nke abụọ. Ọ bụ onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ga-eme ihe omume a.
Mkparịta Ụka nke Mbụ: E nwere ike ikenye nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị ihe omume a. E kenye ya nwanna nwoke, onye ya na ya ga-eme ya kwesịrị ịbụ nwoke ibe ya ma ọ bụ onye ezinụlọ ya, e kenyekwanụ ya nwanna nwaanyị, onye ya na ya ga-eme ya kwesịkwara ịbụ nwaanyị ibe ya, ma ọ bụ onye ezinụlọ ya. Ha nwere ike ịnọdụ ala ma ọ bụ kwụrụ ọtọ mee ya. Onye ga-eme ihe omume a kwesịrị ikele onye ọ na-ezi ozi ọma otú e si ekele ekele n’ókèala ha. E kwesịrị iji ihe dị n’ebe e dere Ihe Gị na Mmadụ Nwere Ike Ikwurịta mee ihe omume a.
Nletaghachi nke Mbụ: E nwere ike ikenye nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị ihe omume a. E kenye ya nwanna nwoke, onye ya na ya ga-eme ya ga-abụ nwoke ibe ya, e kenyekwanụ ya nwanna nwaanyị, onye ya na ya ga-eme ya ga-abụkwa nwaanyị ibe ya. (km 5/97 p. 2) Ha nwere ike ịnọdụ ala ma ọ bụ kwụrụ ọtọ mee ya. Onye ga-eme ihe omume a kwesịrị igosi ihe a ga-ekwu ma a gaghachi na nke onye gosiri mmasị ná Mkparịta Ụka nke Mbụ. E kwesịrị iji ihe dị n’ebe e dere Ihe Gị na Mmadụ Nwere Ike Ikwurịta n’Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ mee ihe omume a.
Nletaghachi nke Abụọ: E nwere ike ikenye nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị ihe omume a. E kenye ya nwanna nwoke, onye ya na ya ga-eme ya ga-abụ nwoke ibe ya, e kenyekwanụ ya nwanna nwaanyị, onye ya na ya ga-eme ya ga-abụkwa nwaanyị ibe ya. (km 5/97 p. 2) Ha nwere ike ịnọdụ ala ma ọ bụ kwụrụ ọtọ mee ya. Onye ga-eme ihe omume a kwesịrị igosi ihe a ga-ekwu ma a gaa na nke onye gosiri mmasị ná Nletaghachi nke Mbụ. E kwesịrị iji ihe dị n’ebe e dere Ihe Gị na Mmadụ Nwere Ike Ikwurịta mee ihe omume a.
Ọmụmụ Baịbụl: E nwere ike ikenye nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị ihe omume a. E kenye ya nwanna nwoke, onye ya na ya ga-eme ya ga-abụ nwoke ibe ya, e kenyekwanụ ya nwanna nwaanyị, onye ya na ya ga-eme ya ga-abụkwa nwaanyị ibe ya. (km 5/97 p. 2) Ha nwere ike ịnọdụ ala ma ọ bụ kwụrụ ọtọ mee ya. Onye ga-eme ihe omume a ga-eme ya otú ga-egosi na ha amụwala ihe amụwa, ọ bụghị ka ha ka chọrọ ịmalite amalite. N’ihi ya, ọ dịghị mkpa ikwu okwu mmeghe ma ọ bụ okwu mmechi, ọ gwụla ma à gwara ya na ebe a ga-ele ya anya bụ n’okwu mmeghe ma ọ bụ n’okwu mmechi. Ọ dịghịkwa mkpa ịgụ paragraf niile, ọ bụ eziokwu na mmadụ nwekwara ike ịgụcha ya ma ọ chọọ. Onye ga-eme ihe omume a kwesịrị igosi otú e si ezi ihe nke ọma.
Okwu: Ihe omume a ga-abụ okwu nwanna nwoke ga-agwa ọgbakọ.
5. Otú Ndị Kraịst Si Ebi Ndụ: A bụchaa abụ, ihe omume ga-esochinụ ga-ewe nkeji 15. O nwere ike ịbụ otu ihe omume ma ọ bụ abụọ ga-enyere anyị aka ịna-eme ihe Baịbụl kwuru. Ọ bụ okenye ma ọ bụ ohu na-eje ozi ruru eru ka a ga-ekenye ihe omume a, ọ gwụkwala ma e nyere ntụziaka dị iche. Ma, ọ bụ naanị ndị okenye ka a ga na-ekenye ihe omume mkpa ọgbakọ.
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: Nkeji 30. Ọ bụ okenye ruru eru ka a ga-ekenye ya. (N’ọgbakọ e nwere ndị okenye ole na ole, ohu na-eje ozi ruru eru nwere ike iduzi ya.) Ọ bụ ndị okenye ga-ekpebi okenye ma ọ bụ ohu na-eje ozi ruru eru ga-eduzi ya. Ndị a họpụtara ka ha na-eduzi ọmụmụ ihe a kwesịrị iduzi ya nke ọma ka ha nwee ike iduzicha ya n’oge e kenyere ha. Ha ga-eme ka ụmụnna ghọta amaokwu Baịbụl ndị gbara ọkpụrụkpụ dị na paragraf ndị a na-amụ, nakwa otú ha ga-esi eme ihe ndị ha mụtara. Ha kwesịrị ịgụ ihe ndị e kwuru n’akwụkwọ anyị banyere otú e si eduzi Ọmụmụ Ihe Ụlọ Nche ka ha nwee ike ịma otú ha ga-esi na-eduzi Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. O kwe mee, e kwesịrị ịna-agbanwe ndị ga-eduzi ya, na ndị ga na-agụpụta ihe a na-amụ n’izu ọ bụla. Ọ bụrụ na onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ekwuo ka a ghara ijicha nkeji iri atọ duzie ya, nwanna ga-eduzi ya ga-ekpebi ihe ọ ga-eme iji gbubilata oge o kwesịrị iji duzie ya. O nwere ike ikpebi ka a hapụ ịgụ paragraf ụfọdụ.
6. Okwu Mmechi: Nkeji 3 ma ọ bụ ihe na-erughị ya. Onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ga-achịkọta ihe e mere n’ọmụmụ ihe n’ụbọchị ahụ. Ọ ga-ekwu ihe si n’akwụkwọ Azịza Ajụjụ Ndị A Ga-ajụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ, kwuokwa ihe a ga-amụ n’izu ọzọ. O nwere ike jụọ otu ajụjụ a ga-ajụ n’ọmụmụ ihe n’izu ahụ. O nwekwara ike ịkpọ aha ndị ga-eme ihe omume n’izu ọzọ, ma ọ bụrụ na oge dị. Ọ bụ n’oge a ka ọ ga-ama ọkwa ọ bụla e kwesịrị ịmara ọgbakọ ma ọ bụ gụọ akwụkwọ ozi ọ bụla e kwesịrị ịgụrụ ha, ọ gwụkwala ma è kwuru ka e mee ya n’oge ọzọ. E kwesịghị ịna-ama ọkwa ihe ndị dị ka ebe a ga-ezukọ ma ọ bụ ebe a ga-aga ozi ọma, ma ọ bụkwanụ otú a ga-esi na-edebe Ụlọ Nzukọ Alaeze ọcha. A ga-amapawa ihe ndị ahụ na bọọdụ ịma ọkwa. Ọ bụrụ na nkeji atọ a agaghị ezuru onyeisi oche iji kwuo okwu mmechi ya, maakwa ọkwa ma ọ bụ gụọ akwụkwọ ozi ndị o kwesịrị ịgụ, o kwesịrị ịgwa ụmụnna ndị ga-eme ihe omume ndị e nwere n’agba nke ikpeazụ, bụ́ Otú Ndị Kraịst Si Ebi Ndụ, ka ha gbuo ihe omume ha nkenke. (Gụọ paragraf nke 5 na nke 9.) A ga-eji abụ na ekpere mechie ọmụmụ ihe a.
7. Na-agbalịsi Ike n’Ịgụ Ihe na n’Izi Ihe: Malite n’izu ga-ebido na Jenụwarị 7, 2019, onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ga-esi n’ihe dị na broshọ Izi Ihe na-aja ụmụ akwụkwọ mere ihe omume mma ma ọ bụ na-enye ha ndụmọdụ. E dere ebe a ga-ele anya jaa nwa akwụkwọ nke ọ bụla mma ma ọ bụ nye ya ndụmọdụ n’ime akara ngebichi () dị n’ihu ihe omume e kenyere ya n’akwụkwọ Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ. N’izu mbụ n’ọnwa ọ bụla, onyeisi oche na ndị na-ege ntị ga-atụle otu ihe ọmụmụ si na broshọ Izi Ihe. Ọ bụ nwa akwụkwọ ka a chọrọ ka ọ na-ede ihe n’ihe ọmụmụ nke ọ bụla n’ebe e dere “Otú I Si Na-eme” na broshọ ahụ, ọ bụghị onyeisi oche.
8. Ndụmọdụ: Ọ bụrụ na ụmụnna ndị e kenyere ihe omume Mkparịta Ụka nke Mbụ, Nletaghachi nke Mbụ, nke Abụọ na Ọmụmụ Baịbụl emechaa ihe omume ha, onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ga-eji ihe dị na broshọ Izi Ihe jaa ha mma ma ọ bụ nye ha ndụmọdụ. Ọ ga-eji ihe dị ka otu nkeji mee ya. Mgbe onyeisi oche na-akpọpụta nwanna ga-eme ihe omume nke ọ bụla, ọ gaghị ekwu ihe ọmụmụ nke ọ na-ele ya anya na ya. Nwanna ahụ mechaa ihe omume ya, onyeisi oche ga-aja ya mma, kwuokwa ebe e lere ya anya. Ọ bụrụ na o mere nke ọma, ọ ga-ekwu ya, kwuokwa ihe mere o ji bụrụ na o mere nke ọma. Ma, ọ bụrụ na o mechaghị nke ọma, ọ ga-emedakwa obi kwuo ebe o kwesịrị imezikwu ihe. Onyeisi oche ahụ nwekwara ike ikwu ihe ndị ọzọ gbasara ihe omume ahụ ma ọ bụrụ na o chere na ọ ga-abara nwa akwụkwọ ahụ ma ọ bụ ndị ọzọ uru. O nwekwara ike iji broshọ Izi Ihe ma ọ bụ akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi nyekwuo nwanna mere ihe omume ndụmọdụ mgbe naanị ya na ya nọ. O nwere ike ime ya ma a gbasaa ọmụmụ ihe ma ọ bụkwanụ n’oge ọzọ. Ndụmọdụ ọ ga-enyekwu nwere ike ịgbasa ebe e lere ya anya ma ọ bụkwanụ n’ihe ọzọ.​—Gụọ paragraf nke 13 na nke 16 kwuru gbasara ọrụ onye nlekọta Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ na ọrụ onye na-enye ndụmọdụ.
9. Oge: Onye ọ bụla na-eme ihe omume ekwesịghị iri oge. Onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ekwesịghịkwa iri oge. E kwesịrị iji akọ kwụsị nwanna na-eme ihe omume Ọgụgụ Baịbụl, Ozi Ụlọ n’Ụlọ, Nletaghachi, ma ọ bụ Ọmụmụ Baịbụl ma oge ya zuo. Ọ bụrụ na ụmụnna ga-eme ihe omume ndị ọzọ erie oge, onye na-enye ndụmọdụ ga-enye ha ndụmọdụ, ma ọ gaghị abụ n’ihu ọha. Ihe niile a ga-eme n’ọmụmụ ihe a, ma abụ ma ekpere, ga-ewe otu awa na nkeji iri anọ na ise.
10. Izu Onye Nlekọta Sekit Ga-eleta Ọgbakọ: Onye nlekọta sekit bịa ileta ọgbakọ, ọgbakọ ga-enwe ọmụmụ ihe otú ahụ e si hazie ya n’Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ. Naanị ihe ga-agbanwe bụ na a gaghị enwe Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. Kama, onye nlekọta sekit ga-eji oge ahụ kwuo okwu ije ozi ya ga-ewe nkeji 30. Ma tupu ya ekwuwe okwu ya, onyeisi oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ga-achịkọta ihe niile a mụrụ n’ụbọchị ahụ, kwuo ihe ndị a ga-amụ n’izu ọzọ, maa ọkwa ndị e kwesịrị ịma, gụọ akwụkwọ ozi ndị e kwesịrị ịgụ, ma kpọpụtazie onye nlekọta sekit. Onye nlekọta sekit kwuchaa okwu ya, ọ ga-eji abụ ọ bụla ọ họọrọ mechie ọmụmụ ihe. A gaghị enwe klas ọzọ n’izu ahụ onye nlekọta sekit na-eleta ọgbakọ. Ìgwè na-amụ ihe n’asụsụ ọzọ nwere ike ịmụ ihe nke ha. Ma, o ruo mgbe onye nlekọta sekit ga-ekwu okwu ije ozi ya, ha ga-esonyere ọgbakọ gee okwu ya.
11. Izu Ọgbakọ Ga-aga Mgbakọ Sekit ma ọ bụ Mgbakọ Ukwu: O nweghị ọmụmụ ihe ọgbakọ ga-enwe n’izu ha ga-aga mgbakọ sekit ma ọ bụ mgbakọ ukwu. Onye ọ bụla ma ọ bụ ezinụlọ ọ bụla kwesịrị ịmụ ihe ndị a ga-amụ n’ọmụmụ ihe n’izu ahụ n’onwe ha.
12. Izu A Ga-echeta Ọnwụ Jizọs: Ọ bụrụ na ụbọchị a ga-echeta ọnwụ Jizọs dabara n’ụbọchị Monde ruo Fraịdee a gaghị enwe Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ n’izu ahụ, ma a ga-enwe nzukọ ozi ubi n’ụbọchị ahụ.
13. Onye Nlekọta Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ: Ọ bụ okenye ndị okenye họpụtara ga-abụ onye nlekọta Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ. Ọrụ ya bụ ịhụ na ọmụmụ ihe a na-aga nke ọma nakwa na a na-eme ihe niile otú e kwuru ka e si na-eme ya n’akwụkwọ a. Ya na onye na-enye ndụmọdụ kwesịrị ịna-arụkọ ọrụ. Onye nlekọta Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ nwetahaala Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ nke ọnwa ọ bụla, ọ ga-ebido ozugbo ikenye ụmụnna ihe omume ndị ha ga-eme. (Gụọ paragraf nke 4.) E kwesịrị inye ụmụnna ndị ga-eme ihe omume ndị a ihe omume ha ọ́ dịkarịa ala izu atọ tupu oge ha ga-eme ihe omume ha. Ọ bụ Akwụkwọ Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ (S-89) ka a ga-eji ekenye ha ya.
14. Onyeisi Oche Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ: N’izu ọ bụla, otu okenye ga-abụ onyeisi oche n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ. (N’ọgbakọ ndị e nwere okenye ole na ole, ohu na-eje ozi ruru eru nwere ike iduzi ya.) Ọ bụ ọrụ onyeisi oche ịkwadebe okwu mmeghe na okwu mmechi ya nakwa iduzi ihe omume ndị ahụ a ga-ele vidio ndị na-egosi ihe ndị anyị nwere ike ikwu n’ozi ọma, nakwa vidio ndị kọwara ihe ọmụmụ ọhụrụ dị na broshọ Izi Ihe. Ọ bụkwa ya ga-akpọpụta ndị niile ga-eme ihe omume. Ọ bụrụkwa na ndị okenye adịghị ọtụtụ, o nwere ike ime ihe omume ụfọdụ n’ọmụmụ ihe ahụ. Mmadụ mechaa ihe omume, o kwesịghị ikwu ọtụtụ okwu tupu ya akpọpụta onye ọzọ. Ọ bụ ndị okenye niile ga-ekpebi okenye ruru eru ịbụ onyeisi oche ọmụmụ ihe a. A ga na-ekenye okenye ọ bụla a họpụtara izu nke ọ ga-abụ onyeisi oche. Ọ bụ otú ihe si dịrị n’ọgbakọ ga-ekpebi ma à ga na-ekenye onye nlekọta Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ịbụ onyeisi oche ọmụmụ ihe a karịa ndị okenye ndị ọzọ ruru eru. Ọ bụrụ na okenye ruru eru iduzi Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ, ọ ga-abụkwa na o rukwara eru ịbụ onyeisi oche n’ọmụmụ ihe a. Ma, biko burunụ n’obi na okenye ga-abụ onyeisi oche ga na-eji obiọma aja ndị mere ihe omume mma, na-emedakwa obi ma o nyewe ha ndụmọdụ ndị ga-abara ha uru. Ọ bụkwa ya ga na-ahụ na a gbasara ọmụmụ ihe n’oge e kwesịrị ịgbasa ya. (Gụọ paragraf nke 6 na nke 9.) Ọ bụrụ na ohere dị n’elu ebe ikpo okwu maka idowe maịkrofon ọzọ onyeisi oche ga-eji na-akpọpụta ndị na-eme ihe omume, ya abụrụkwa na yanwa chọrọ, e nwere ike idowere ya maịkrofon ahụ otú ọ ga-abụ, ya jiri ya na-akpọpụta onye ga-eme ihe omume, onye ahụ agaa guzoro na tebụl ikpo okwu, na-eche ka o kwuchaa. Ọ bụrụkwa na onyeisi oche ahụ chọrọ, e nwere ike idowere ya oche n’ikpo okwu ebe ọ ga-anọrọ ọdụ mgbe Ọgụgụ Baịbụl na-aga n’ihu nakwa n’oge Mụtakwuo Izi Ozi Ọma nke Ọma. Ime ya otú ahụ nwere ike ime ka a ghara ịtụfu oge ọ bụla.
15. Onye Na-ahaziri Ndị Okenye Ọrụ: Ọ bụ onye na-ahaziri ndị okenye ọrụ ga na-ekenye ndị niile ga-eme ihe omume n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ihe omume ha, ma e wezụga ndị ga-eme ihe omume Ọgụgụ Baịbụl, Ozi Ụlọ n’Ụlọ, Nletaghachi, na Ọmụmụ Baịbụl. Ọ bụ ya ga na-ekenyekwa ndị okenye a họpụtara ịbụ ndị isi oche izu onye nke ọ bụla ga-abụ onyeisi oche n’ọmụmụ ihe. Ọ ga-akpọtụrụ onye nlekọta Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ ma hụ na a mapawara akwụkwọ e dere aha ndị niile ga-eme ihe omume n’ọmụmụ ihe ahụ na bọọdụ ịma ọkwa.
16. Onye Na-enye Ndụmọdụ: Ọ kacha mma ịhọpụta okenye maara otú e si ekwu okwu nke ọma ka ọ na-arụ ọrụ a. Ọrụ ya bụ inye okenye na ohu na-eje ozi ọ bụla ndụmọdụ ma e nwee ebe ha kwesịrị imezikwu ihe n’ihe omume ọ bụla ha mere, ma ọ bụ n’Ọmụmụ ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ, ma ọ bụ ma ha kwuo okwu ihu ọha, ma ọ bụ duzie Ọmụmụ Ihe Ụlọ Nche, ma ọ bụ Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ, ma ọ bụkwanụ gụpụtara ọgbakọ Ụlọ Nche ma ọ bụ akwụkwọ e ji amụ ihe n’Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. Mana ọ gaghị abụ n’ihu ọha. (Gụọ paragraf nke 9.) Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị okenye na-ekwu okwu nke ọma ma na-akụzikwa ihe nke ọma n’ọgbakọ, e nwere ike ịna-ahọpụta otu n’ime ha kwa afọ ka ọ bụrụ onye na-enye ndụmọdụ. Ọ bụghị mgbe niile okenye ma ọ bụ ohu na-eje ozi mere ihe omume ka onye na-enye ndụmọdụ ga-enye ya ndụmọdụ.
17. Klas Ndị Ọzọ: Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị na-eme ihe omume Ọgụgụ Baịbụl, Ozi Ụlọ n’Ụlọ, Nletaghachi, na Ọmụmụ Baịbụl, ọgbakọ nwere ike ikewapụta klas ọzọ. Klas ọ bụla kwesịrị inwe onye ruru eru ga na-eduzi ya. Ọ kacha mma ka onye ahụ bụrụ okenye. N’ọgbakọ a na-enweghị okenye ga-eduzi ya, ohu na-eje ozi ruru eru nwere ike iduzi ya. Ọ bụ ndị okenye niile ga-ekpebi onye ga na-eduzi klas a. Ọ bụkwa ha ga-ekpebi ma ọ̀ ga-abụ otu onye duzichaa n’izu a, onye ọzọ eduzie n’izu ọzọ, ma ọ bụkwanụ na otu onye ga na-eduzi ya. Onye ga-eduzi ya kwesịrị iso ntụziaka e nyere na paragraf nke 8. Ọ bụrụ na e nwere klas ọzọ, e kwesịrị ịgwa ndị e kenyere ihe omume na klas ahụ ka ha gaa na klas ha ma e mechaa ihe omume a kpọrọ Ihe Anyị Mụtara n’Okwu Chineke, bụ́ nke a na-eme n’agba nke mbụ a kpọrọ Akụ̀ Ndị Si n’Okwu Chineke. Ha kwesịrị ịbataghachi ma e mechaa ihe omume ndị dị n’agba nke abụọ a kpọrọ Mụtakwuo Izi Ozi Ọma nke Ọma. Ọ bụrụ na o kwere omume, e kwurịtawa ihe e gosiri na vidio, ndị nọ na klas nke ọzọ kwesịrị ịna-ahụ ma ọ bụ na-egere ihe a na-eme. Ma ọ́ bụghị otú ahụ, onye ndụmọdụ inye aka kwesịrị iji ekwentị ma ọ bụ tablet duziere ha ya.
18. Vidio: E nwere vidio ụfọdụ a ga na-ekiri n’ọmụmụ ihe a. Vidio ndị a ga-egosi n’izu ọ bụla n’ọmụmụ ihe anyị ga na-adị na JW Library. E nwere ike iji kọmputa na ekwentị ụfọdụ danloduo ha. E gosichaa ọgbakọ vidio ndị a n’Ọmụmụ ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ, e nwekwara ike iji vidio ndị nke e gosiri otú e si ezi ozi ọma duzie nzukọ ozi ubi.
Ntụziaka Maka Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụomumu-ihe-etiti-izuNtụziaka Maka Ọmụmụ Ihe Etiti IzuE kwesịrị iji ntụziaka ndị e dere n’akwụkwọ a nakwa ndị dị n’Usoro Ihe Omume Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ na-enwe ọmụmụ ihe etiti izu anyị.ntuziaka, ozi anyi na otu anyi si ebi ndu, omumu ihe, etiti izu, jw, s 38Ntụziaka Maka Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi NdụIhe a bụ ntụziaka maka otú e kwesịrị isi na-enwe ọmụmụ ihe etiti izu anyị.Ntụziaka Maka Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ.
Ntụziaka Maka Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ.
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu Ntụziaka Maka Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ